Japana: Fitadiavam-bady! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2009 19:52 GMT
Nanomboka tamin’ny fararanon’ny taona lasa teo, tany Japana, nisy fiteny vaovao indray mandehandeha eny. Tsy inona izany fa ny konkatsu 婚活 (fanafohezana ny kekkon katsudô 結婚活動), nosintonina tamin’ilay fehezanteny malaza shûkatsu (就活 fitadiavan-kasa), afaka adika tsotsotra hoe ‘fitadiavam-bady’.
Tsy teny vaovao monja ihany ny Konkatsu Konkatsu fa trangam-piarahamonina nipoitra tsikelikely ka nahatonga ny Japone ‘hanome anarana’ sy hanaiky azy, ary koa haneho azy anatina tantara an-tsary mitohy [ja] sy fandaharana amin'ny fahitalavitra [ja].
Sary avy ao amin'ny Flickr-n’i Kalandrakas
Fantatra amin’ny maha-iray amin’ireo firenena ahitàna taham-piterahana kely indrindra eran-tany, miatrika olana hafa ihany koa i Japana, mety ho noho ny farim-piainana ambony kokoa: ny fisondrotrin’ny isan’ny olona tokan-tena, izay tsy manana eritreritra hamotsotra ny faniriany momba ny asa sy ny fahaleovantenan’izy ireo mba hanangana ankohonana.
Araka ny fanadihadiana ao amin’ny ‘Ny zava-misy eto amin’ny firenena’ [ja] nataon’ny National Institute of Population sy ny Social Security Research, nandritra ny 30 taona teo anelanelan’ny taona 1970 sy ny taona 2000, nisondrotra avo telo heny ny tahan’ny vehivavy tsy manam-bady (20-30 taona) raha 18% dia lasa 54% ary ny tahan’ny lehilahy tsy manam-bady (30-40 taona) koa dia nisondrotra ho 43% raha 12 % teo aloha.
Noho izany, toa tsy dia mifanaraka amin’ny lamaody ny fitadiavam-bady, nefa, mety ho noho ny olana ara-toekarena na mety noho ny tsindry ara-tsosialy zakain’ireo tokan-tena ankehitriny, indrindra ny vehivavy, maro ireo vehivavy sy lehilahy azo lazaina ho efa matotra no nanapa-kevitra ny hamoritra tanan’akanjo ary hitady vady.
Konkatsu@net, vohikala natokana ho an’ny konkatsu dia manome toro-hevitra mba hahombiazana amin’ny ‘fitadiavam-bady’.
Nandritra ny fotoan’ny ‘fitadiavan-kasa’, tsy dia ny manana fifandraisana amin’ilay orinasa tianao iasàna fotsiny ihany no ilaina mba hahafahana manatrika ireo fikarakarana fihaonana ho fampahafantarana omaniny sy hahazoana dinidinika fandraisana mpiasa. Misy savaranonando tena manan-danja koa, toy ny fahazoana fahaiza-manao manokana, ny fahafantaranao izay tena hery mampiavaka anao sy izay fahalemenao, ny fitrandraham-baovao ary ny fiomanana amin’ny fanadinana an-tsoratra mahazatra.
Toy izany koa, miankina amin-javatra maro samihafa ny ‘fitadiavam-bady’.
Ny lehilahy dia ‘hanazatra ny tenany, ‘hanatsara ny fitiavany eo amin’ny fifidianana akanjo’, ‘hampitombo ny karazan-javatra horesahana’ ary ‘hakany amin’ny trano fikarakarana hatsaran-tarehy’. Toy izany koa ny vehivavy dia ‘hikarakara ny vatany sy ny hohony’ ary ‘hianatra nahandro’. Noheverina ho nilaina daholo ireny fepetra ireny ho an’ny konkatsu.
Na izany aza, ny tena zava-dehibe dia ‘ny fampitomboana ny isan’ny fotoana ahafahana mifanena amin’olona maro’.
Chii, vehivavy 37 taona mpiasa am-birao, dia mitantara ao amin’ny vohikalany ny zavatra niainany amin’ny maha-mpitady vady azy nisoratra anarana tamina ‘orinasa mpanampy amin’ny fanambadiana’.
Nanazava ny antony nandraisany anjara tamina fandaharan’asa konkatsu izy ao amin’ny teny fampidirany. Ny tena niavaka dia ny nanehoany tamin’ny fomba mampihomehy kely ao amin’ny pejy anaovany fandalinana sy anaovany kisarisary ireo olona hafahafa naroson’ny masoivoho mpanampy amin’ny fitadiavam-bady taminy ka nandiso ny fanantenany hahita ny ‘silam-panahiny’.
Nanana olon-tiana aho nanomboka tamin’ny faha-27 ka hatramin’ny faha-32 taonako. Nefa hatramin’ny nilazany tamiko fa te-hisaraka amiko izy, nanohy ny fiainako toy ny tokan-tena aho ary nieritreritra fa na izany aza dia hihatsara ihany ny toe-draharaha.
Niasa birao efa ho 10 taona mahery aho ary amin’ny lafiny iray, izaho NO vehivavy mitana toerana ambony nefa ny ahy dia ‘asa kely’ ihany raha mitaha amin’ny an’ireo olon-kafa izay lehibe ato amin’ny orinasa misy ahy.
Ka mba hisorohana ny fijanonana ela eto miaraka amin’ireo olona ireo (tsy ho voasongoko na oviana na oviana ry zareo…), nanapa-kevitra aho hisoratra aminà ‘orinasa mpanampy amin’ny fanambadiana’.
Lehilahy hafa isan’andro mahafeno ireo fepetra napetraka no ampihaonin-dry zareo amiko.
Nefa…toa mbola misy zavatra tsy mety foana.
Raha mijery ny momba azy ireo (taona, fidiram-bola, toe-batana ivelany) dia ao tsara ry zareo.
Nefa, nefa…mbola misy zavatra tsy mety.
Izaho tsy miandry zavatra manokana. Olona tsotra no ilaiko.
Eny … olona tsotra.
Ankehitriny, hita eny amin’ny biraom-bahoaka koa ireo dokam-barotra momba ny masoivoho mpanampy amin’ny fitadiavam-bady, araka ny tenenin’i Bon amintika.
Tao amin’ny biraon’ny distrika aho ary nisy dokambarotra iray momba ny orinasa mpanampy amin’ny fitadiavam-bady nisarika ny saiko
Andro vitsivity teo aloha, iray volana taorian’ny nahitako voalohany ilay dokambarotra ary nandritry ny fikarakaran’izy ireo dika mitovin’ny bokim-pianakaviana, tsy tamim-pieritreretana loatra no nandikako iray tamin’ireny dokambarotra ireny.
Avy eo aho niantso azy ireo
Hisoratra anarana aho afaka herinandro
Nefa momba ireny karazana masoivoho ireny sy ny tranga toy ireny amin’ny ankapobeny, tonga avy any amina renim-pianakaviana Japone nanoratra tamin’ny teny anglisy ny tsikera vitsivitsy:
Mila manao fanadihadiana sy fanadinana ve ry zareo mba hifankahitany amin’ny olona hiarahany? Mila manao akanjo tsara mba ho toy ny olom-banona ve?
Tsy maintsy manana fisainana ambadika ny olona namorona ireo teny vaovao ireo. Mitsara ireo tanora izy mba hahatonga azy ireny ho maika hanambady sy ho resy lahatra ho any amin’ny
masoivoho mpanampy amin’ny fitadiavam-bady [ja]!
Aza dondrona, tompokolahy sy tompokovavy! Aza maimaika ary aza mamita-tena!